५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बढेपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युतको कारोवार रद्द | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बढेपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युतको कारोवार रद्द
Home अर्थ ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बढेपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युतको कारोवार रद्द
५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बढेपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युतको कारोवार रद्द
काठमाडौं : नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीको सोमबारको सेयर कारोवार रद्द गरेको छ। बजार खुल्ने वित्तिकै उक्त कम्पनीको सेयर मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेपछि स्टकले सबै कारोवार रद्द गरेको हो। स्टकका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले आवश्यकभन्दा बढीको कारोवार भएका कारण कारोवार रद्द गर्नुपरेको जानकारी दिए।
आइतबारदेखि दोस्रो बजारमा कम्पनीको सेयर कारोवार सुरु भएको थियो। स्टकले सुरुआती चरणमा प्रतिकित्ता २२४ सम्मको सीमा निर्धारण गरेको थियो। आज बजार खुल्ने बित्तिकै दुई लाख ४३ हजार कित्ता शेयर खरिदका लागि लगानीकर्ता लालायित भएका थिए। खरिद गर्न चाहनेको सङ्ख्या बढे पनि बिक्री गर्न चाहने भने एकजना पनि देखिएको थिएन।
नियमानुसार कुनै कम्पनीको सेयर मूल्यमा १० प्रतिशत भन्दा बढीले कमी आउँदा वा बढ्दा ‘सर्किट ब्रेक’ लगाउने गरिन्छ । यसको अर्थ १० प्रतिशतभन्दा बढीले कमी हुँदा वा बढी हुँदा सेयर कारोवार हुनुहुँदैन।
तर प्राविधिक समस्याका कारण माथिल्लो तामाकोशीको सेयरमा उच्च अङ्कले वृद्धि हुन पुग्यो। बजार खुल्दा सो कम्पनीको शेयर रु ११२ ले वृद्धि भई रु ३३६ पुगेको थियो।स्टकले भने सीमाभन्दा बाहिर गएर भएको कारोवार रद्द भएको जनाएको छ।
सेन्ट्रल फाइनान्सको धितोपत्र सूचीकरण स्थगित
स्टकले आजै सेन्ट्रल फाइनान्स लिमिटेडको धितोपत्र सूचीकरण स्थगित गरेको छ। धितोपत्र बजार मूल्यमा प्रभाव पार्ने सूचना सम्प्रेषणबारे स्पष्ट जानकारी नदिइएकाले कम्पनीको धितोपत्र सूचीकरण स्थगित भएको हो।
कम्पनीको २७ गते बसेको सञ्चालक समितिको निर्णयमा नगद लाभांशसम्बन्धी सूचना आइतबार पत्रमार्फत प्राप्त भएको थियो । बजार मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सूचना तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि दुई दिन ढिला गरेर मात्रै उपलब्ध भएको स्टकको भनाइ छ।
स्टकले नियमानुसार आवश्यक सूचना वा जानकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुने भनी व्यवस्था भएकाले सो जिम्मेवारी पूरा नगरेकाका कारण नियमअनुसार किन कारवाही नगर्ने भनी स्टकले स्पष्टीकरण सोधको छ। स्टकले २४ घण्टा भित्र आवश्यक स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
यस्तै स्टकमा आजै बैंक अफ काठमाडौँको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ। बैंकले १४ प्रतिशत सेयर लाभांश दिने निर्णय लगत्तै प्रतिकित्ता २८८ मा मूल्य समायोजन गरिएको हो। बैंकको औसत सेयर मूल्य ३२८ रहेको छ।
उपचार खर्च तिर्न नसक्दा दुई महिनादेखि अस्पतालमै बन्धक
आगो वा हिटर बालेर सुत्दा किन मृत्यु हुन्छ ?
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटले धेरै नेपालीमा आशाको सञ्चार जगाइदिएको छ ।
कर्मचारीको तलब १८ देखि २० प्रतिशत बढ्यो , अब कसको कति ? सूचीसहित
आगामी बजेटमा शेयर बजारको पूँजीगत लाभकरको मुद्दालाई टुङ्ग्याइने भएको छ।
बुद्ध एयर उडान थप्दै काठमाडौं–सुर्खेत
रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश ५ मा त्रिपक्षीय समझदारी